I-China Abaxhasi beYoga bayaziqhelanisa neYoga eBangkok, eThailand abavelisi kunye nabathengisi | Amanzi eTspring
Abathanda beyoga baziqhelanisa neYoga eBangkok, Thailand
I-Thailand yenye yezona ndawo zibalaseleyo emhlabeni ukuziqhelanisa neyoga.
Kutheni kufuneka uziqhelanise neYoga eThailand
Iindidi zootitshala be-yoga be-stellar benza ujikelezo lwabo eThailand rhoqo rhoqo ngokumangalisayo. Inani labahlohli abakumgangatho wehlabathi bade bayenza iThailand yalikhaya labo! Oku kuqinisekisa ukuba kuya kubakho ubutyebi beendibano zocweyo zeyoga kunye neendawo zokuzikhethela onokukhetha kuzo nanini na ucwangcisa uhambo lwakho.
Ngapha koko, aba bahlohli ngokuqinisekileyo benza iindawo ezixakekileyo zeyoga. Uyaziva usekhaya xa undwendwela okokuqala istudiyo seyoga eThailand. Akuqhelekanga ukuba iiklasi ziphume kunye kunye emva kokuziqhelanisa, kwaye ukwamkela, ukuzola kwe-sabai sabai eThailand kusebenza kwi-yogis yayo.
Nazi ezi-3 zeZona ndawo ziBalaseleyo zeThailand zeYoga, kunye nalapho unokuziqhelanisa khona:
I-Thailand inemilingo ngokwenyani, kwaye likhaya kwiindawo ezininzi zeyoga kwilizwe liphela. Nazi ezinye ezimbalwa zeendawo zobugqi zaseThailand!
Ukuxakeka eBangkok mhlawumbi ayisiyiyo indawo yokuqala ocinga ngayo xa kufikwa kumatshini wakho weyoga, kodwa ubuqhetseba bayo sisizathu esifanelekileyo sokunxibelelana kwakhona nokuziqhelanisa kwakho. Ngelixa ikomkhulu lelizwe linganikezeli ngeendawo zeyoga ezizolileyo oza kuzifumana kwenye indawo, isixeko siqhayisa ngezitudiyo ezigqwesileyo.
E-Bangkok, abafundisi banoburhalarhume kwaye ii-studio zinikezelwe- yima kwiklasi kwiYoga Elements ethathwa njengeyona studio ye-yoga ye-Bangkok okanye i-Absolute Yoga ukukusa kwi-Big Mango ngaphambi kokuba uye e-exotic. Okanye, ukuba ujonga inkcubeko ethe kratya, fumana ukuhamba kwe-Iyengar kwi-Empower Yoga.
Amanzi acwebezelayo acocekileyo acocekileyo, iintende ezijikelezayo kunye namawa anomdla- iziqithi zaseThai zifanelwe kuko konke ukuthandwa kwazo kwaye ngokuqinisekileyo yindawo entle yokwenza iyoga. Ixesha lucotha kwiziqithi, indalo ikujikelezile, kwaye amaqondo obushushu afudumeleyo akunceda ukhulule kwaye uzive ukhululekile.
Unokufumana ii-studio ezincinci ze-yoga kunye noluntu lwezempilo kwiindawo ezininzi eziqhelekileyo njenge-Koh Tao, iKoh Lanta kunye ne-Koh Samui, kodwa enye yezona ndawo zibalaseleyo ukutyelela ngokukodwa i-yoga yiKoh Phangan.
Ngomboniso weyoga odlamkileyo, iKoh Phangan likhaya lamaziko adumileyo kwihlabathi kubandakanya ikomkhulu lehlabathi leAgama Yoga kunye neSanctuary, indawo ebabazekayo ebonelela ngeedetox kunye nonyango lwe-spa. Ukuba unomdla wokugqiba uqeqesho lwakho lootitshala beyoga kumazantsi eThailand, jonga iJivani Yoga.
Okokugqibela kodwa ngokuqinisekileyo ubuncinci "yiRose yaseNtla" -Chiang Mai. Ngabemi abamalunga nama-200,000, iChiang Mai sesona sixeko sikhulu kumantla eThailand. Iintaba zayo ezitshayelayo, iingxangxasi ezininzi, kunye neendawo ezolileyo ezizibileyo ziye zabamba iintliziyo ezininzi.
Ndicinga ukuba iChiang Mai, kunye nawo onke amantla, yeyona ndawo yokuphinda uqhagamshele kunye nendalo, ukuziqhelanisa neyoga yakho, kunye nawe. Kukho into encinci kuwo wonke umntu olapha-ukutya okumangalisayo, ubuhle bendalo, ubomi obumnandi bobusuku, kunye neendawo eziwisa umhlathi-kunye noluntu oluqhuba kakuhle kwezempilo nakwimpilo yoluntu.
Yiya kulo naliphi na iklasi kwesinye sezitudiyo ezikufutshane neSixeko esiDala, ezinje ngeNamo Chiang Mai okanye i-Wild Rose Yoga, kwaye uya kuziva kwangoko ukwamkelwa ngabaqeqeshi abafudumeleyo beyoga abathi le ndawo ikhethekileyo ekhaya. Indlela yokuphila ebuyela umva kunye nokugxininisa kwimpilo yendalo yenza emantla indawo efanelekileyo yokugxila kwinkqubo yakho.
Ixesha Post: Aug-13-2020